बाटोमा भेटाएको पैसा टिप्नु भएकाे छ ? यस्ताे भन्छ वास्तुशास्त्रले - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बाटोमा भेटाएको पैसा टिप्नु भएकाे छ ? यस्ताे भन्छ वास्तुशास्त्रले
कहिलेकाहीँ बाटो हिड्ने क्रममा धेरैजसो मानिसहरुले अचानक पैसा भेटाउने गर्छौँ । प्रायजसो मानिसहरुले यतिकै छाड्दिन्छन् भने कतिपयले उक्त पैसा टिप्छन् । बाटोमा हिड्दा हिड्दै अचानक पैसा देख्दा टिप्नु स्वभाविक नै हो ।
तर बाटोमा भेटिएको पैसालाई कतिपयले शुभ मान्दछन् त कतिपयले अशुभको प्रतिक मान्छन् । तर वास्तु शास्त्रका अनुसार बाटोमा भेटिएको पैसा टिप्नु भयो भने पनि आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा काम गर्नु भन्दा पनि कुनै मठमनि्दर वा पितृको नाममा अन्न किनेर दान गर्नाले घरमा धन सम्पत्तीको वृदि्ध हुन्छ ।
वास्तु शास्त्रका अनुसार महालक्ष्मी योग भएकाहरुका लागि माता लक्ष्मीको विशेष कृपा हुने भएकाले अचानक पैसा भेटाउने योग हुन्छ । यसरी भेटिएको पैसा आफ्नो काममा नभई समाजकल्याणमा लगाउन सकियो भने राम्रो कार्यशिद्ध हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाटोमा भेटाएको पैसा सिक्का वा नोट दुबै हुन सक्छ । यदि सिक्का भेटाएको अवस्थामा आफ्नो पूजा वा तिजोरीमा राखेमा धनको वृदि्ध वृदि्ध र नोट भएको खण्डमा त्यहि नोटले सह रहने र कहिल्यै पनि लक्ष्मीले साथ नछाड्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कतिपय मानिसहरुले भेटाएको पैसा घर ल्याउन हुन्न भन्ने पनि गरेका छन् । वास्तु शास्त्रले भेटाएको पैसा घरमा ल्याउदा कुनै पनि प्रकारको समस्या नहुने र घाटा नहुने बताएको छ ।
त्यस्तै कतिपय अवस्थामा मनि्दर जाने क्रममा पैसा भेटाउने गरिन्छ । उक्त पैसालाई मनि्दरमा चढाएमा नवग्रहको आशिर्वाद प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।